MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-06-09
at 6/15/2013 09:37:00 PM No comments:
at 6/15/2013 08:27:00 PM No comments:
at 6/15/2013 12:08:00 PM No comments:
at 6/15/2013 01:15:00 AM No comments:
at 6/14/2013 11:17:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အို အစိုးရ ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၄) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃၆) နှင့် (၃၈) ဒေသဖြစ်သော မုန်ဘော် နောင်းဟဲန် အနီး လွိုင်လောမ့်နှင့် လွိုင်ဆတ်ကြားတွင် ဇွန် (၁၄) ရက် ညနေပိုင်း (၂း၀၀) နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်တို့အကြား တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရ၏ ခလရ (၂၄၂)၊ (၅၀၇) ဟုယူဆရသော တပ်ရင်းများသည် ယင်းလှ ဘက်သို့ ထိုးစစ်ဆင်လာသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဗမာစစ်ကြောင်းများသည် ဦးနောင်ဆိုင်း ဆိုသူကိုလည်း လမ်းပြအဖြစ် ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားသောကြောင့် မိသားစုများ စိတ်ပူပန်လျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ တိုက်ပွဲသတင်း အသေးစိတ်ကို ဆက်လက်စုံစမ်းလျှက် ရှိပါသည်။
at 6/14/2013 10:38:00 PM No comments:
at 6/14/2013 08:05:00 PM No comments:
at 6/14/2013 07:44:00 PM No comments:
at 6/14/2013 04:50:00 PM No comments:
at 6/14/2013 01:03:00 PM No comments:
at 6/14/2013 10:02:00 AM No comments:
အစိုးရနှင့် KIO တို့ကြား မေ ၃၀ ရက်က ရရှိခဲ့သော သဘောတူညီချက်များသည် ငြိမ်းချမ်းရေး ပိုမိုခိုင်မာလာအောင် လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစသာ ဖြစ်ပြီး ပြီးဆုံးသွားခြင်း မရှိသေးကြောင်းနှင့် နောက်ထပ် တိုးတက်မှုများ ဆက်လက် မဖော်ဆောင်နိုင်ပါက လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ထပ်မံဖြစ်ပွားလာနိုင်သည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေကြောင်း International Crisis Group က သုံးသပ်ခဲ့သည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ပဋိပက္ခအခြေအနေများကို လေ့လာသုံးသပ်သော မူဝါဒရေးရာ အဖွဲ့ကြီးဖြစ်သည့် International Crisis Group က ဇွန် ၁၂ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကချင်ပဋိပက္ခမှ ယာယီ ငြိမ်းချမ်းရေး အစီရင်ခံစာတွင် ယင်းကဲ့သို့ သုံးသပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
at 6/14/2013 07:24:00 AM No comments:
at 6/13/2013 09:53:00 PM No comments:
at 6/13/2013 05:45:00 PM No comments:
at 6/13/2013 01:19:00 PM 53 comments:
ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မည့် မိုင်းရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းများ စတင်ရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်းထွဋ်ဆွေထံမှ သိရသည်။
"မိုင်းရှင်းလင်းဖို့အတွက် သင်တန်းပို့ချတာတွေ ပြီးစီးသွားပြီး။ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မယ့် ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံနဲ့ အဓိကထား လုပ်ဆောင်သွားမယ်။ သူတို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ" ဟု ဦးသန်းထွဋ်ဆွေက ဆိုသည်။
at 6/13/2013 08:38:00 AM No comments:
၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် ကျောက်မျက်ရတနာ ပြပွဲကို တွေ့ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ရှိသော အရည်အသွေးမြင့် ကျောက်စိမ်းများ မှောင်ခိုလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်သွင်းမှု များပြားလာကြောင်း ဒေသခံများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
"တရုတ်ပြည်ဘက်မှာ ကျောက်စိမ်းမြို့တော် ဆိုတာရှိတယ်။ အမှန်က သူတို့က အမွှမ်းတင်ထားတာ။
သူတို့ဆီမှာ ကျောက်စိမ်း တကယ်မထွက်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်က ကျောက်စိမ်းတွေပဲ အကြီးအကျယ် တင်သွင်းတာပါ။ တစ်ရာမှာ ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ က မှောင်ခိုလမ်းကြောင်း ကနေပြီး တရုတ်ပြည်ဘက်ကို သွားနေတယ်။ ပြပွဲမှာ ပြတယ်ဆိုတာတွေက
at 6/13/2013 08:37:00 AM No comments:
2013 June (1) kawn (11) ya laman Dingdung Ginwang Ginjaw Uphkang Du (Div-O) hte Ginwang Ginjaw Pati Komiti Shingtau Amu Madu yan woi awn nna, Masat (1) Dap Ba Shanglawt Masa Gat Hkai Ka manawt hpung ni hte rau, Putau Ginwang Masat (7) Dap Dung hte Mali Hka mayan na mare ni de sadu gawan let Majanamajaw myitru myit tsang, ru yak jam jau garen gari hkrum sha nga ai Mungshawa, Dap shawa ni hpe n'gun atsam jaw hkawm lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Shanglawt Masa Gat Hkai Hpung ni kaw na Ka Manawt dan ai lamang hpe Masat (7) Dap Dung Daju, Nhtan Zup mare, Mali Yang mare, Mali Bum Run mare ni hta galaw la lai wa sai lam hpe mung na chye lu ai.
at 6/12/2013 01:31:00 PM No comments:
at 6/12/2013 09:20:00 AM No comments:
at 6/11/2013 09:27:00 PM No comments:
at 6/11/2013 06:05:00 PM No comments:
at 6/11/2013 05:21:00 PM No comments:
at 6/11/2013 05:20:00 PM No comments:
at 6/11/2013 02:43:00 PM No comments:
at 6/11/2013 02:42:00 PM No comments:
KIA Masat (36) Dap Dung makawp maga ginra, Mung Shawa Hpyen Hpung (MHH) Masat (5) Dap Kung ni dap jung shara jahkrat nga ai Hpai Kawng maga de shamu shamawt chyinglau lung wa ai, Myen Asuya Hpyen Dap Hk.L.Y (128) Dap na hpyen hpung ni hpe KIA Masat (36) Dap Dung, Masat (5) Dap Kung (MHH) hpyen hpung ni 2013 June (10) ya hkying (2:30)pm ten kaw nna (3:20)pm du hkra ninghkap gasat ai gasat poi byin ai lam chye lu ai.
at 6/11/2013 02:24:00 PM No comments:
at 6/11/2013 02:21:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲ ၂ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင်လည်း ဇွန်လ ၉ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့က ထိုင်းနိုင်ငံကချင်လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း (Kachin Community in Thailand) မှ ဦးဆောင်ကာဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည်။
ထိုနေ့တွင် ကချင်ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ကိုယ်လက်အဂါင်္ချို့တဲ့သွားသူများအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ရန် ရန်ပုံငွေရှာဖွေသည့် အခမ်းအနားလည်းဖြစ်သည်။
at 6/11/2013 02:20:00 PM No comments:
at 6/11/2013 02:18:00 PM No comments:
at 6/10/2013 10:44:00 PM No comments:
at 6/10/2013 10:29:00 PM No comments:
at 6/10/2013 10:27:00 PM No comments:
at 6/10/2013 10:25:00 PM No comments:
2013 June (9) ya hkying (2:00)pm aten KIA Masat (4) Dap Ba, Masat (36) Dap Dung makawp maga ginra Nam Hku mare makau de Myen Atsuya Hpyen Dap Hk.L.Y (128) Dap na hpyen hpung ni shang shamu shamawt chyinglau hkawm nga ai hpe KIA (MHH) hpyen hpung ni kaw nna ninghkap gasat ai gasat poi byin ai lam hpe chye lu ai.
Gasat poi byin ai shara hta lahkawng maga na si hkala ai lam hpe tup hkrak nchye lu shi ai.
at 6/10/2013 06:25:00 PM No comments:
at 6/10/2013 06:23:00 PM No comments:
ဗမာ လူပြိန်းတွေကြားရေပန်းစား ချင်ရင်။
ကုလား ကို ဆဲ ပြ.. .....
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို ဆန့်ကျင် ပြ...
ဖက်ဒရယ် ဆိုရင် ခါးခါးသီးသီး ငြင်း....
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဆဲ ပြ... ကုလားမစုကြည်လို့ ပြော...
at 6/10/2013 06:20:00 PM No comments:
ဒီနေ့ ကချင်ဒေသ နိင်ငံသား ကချင် တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အတူ နိင်ငံသား ရန်ကုန်သားတွေ တစ်သားရှိတာကို ပြခဲ့ကြတယ် ။ အဲဒီပွဲမှာ ကချင်ဒေသ စစ်ဒဏ်သင့် ဒုက္ခသည်စခန်းက ကချင် ဒေါ်ဒေါ်တစ်ယောက်က ဒီလိုပြောသွားတာ ရင်ထဲမှာ နင့်ပြီး တစ်ခုခု လုပ်ပေးနိင်စွမ်းရှိရင်ဆိုပြီး တွေးမိတယ် ။ နောက် ကချင်နိင်ငံသား မိတ်ဆွေကို တွေးမိ တာလေးပြောခဲ့တယ် ။ ကချင်ဒေသမှာ ငြိမ်းချမ်း မျှတမှုတွေ ရစေဖို့ ကချင်ဒေသခံတွေက လိုအပ်လို့ ခေါ်ခိုင်းမယ်ဆို ရန်ကုန်ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်ဝင်များမှ အသင့်ရှိနေပါ့မယ်ဗျာ ။ အော် ကချင်ဒေါ်ဒေါ် ဘာပြောခဲ့တယ်ဆိုတာ တင်ပြပေးပါအုန်းမယ် ။
at 6/10/2013 11:23:00 AM No comments:
at 6/10/2013 11:14:00 AM No comments:
ံHopes Behind The War ဆိုတဲ့ စစ်ပွဲနောက်ကွယ်က မျှော်လင့်ချက်များဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို ဧရာဝတီ က တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်က စစ်မြေပြင်တွေက တကယ့် ပုံရိပ်စစ်တွေနဲ့ မှတ်တမ်းတခု လည်းဖြစ်ပါတယ်။
KIA နဲ့ မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်တို့ကြား ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲတွေကြောင့် အထူးသဖြင့် အပြစ်မဲ့ ဒေသခံ အမျိုးသမီး၊ ကလေးငယ်တွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ဘယ်လို ဒုက္ခတွေ ခံစားခဲ့ရလဲ၊ သူတို့တွေ ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်က ဘာလဲ ဆိုတာ ဧရာဝတီက ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာပါ။
at 6/10/2013 11:12:00 AM No comments:
at 6/10/2013 10:59:00 AM No comments:
at 6/10/2013 08:30:00 AM No comments:
ကချင်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ကချင်စစ်ပွဲ ၂ နှစ်မြောက်တဲ့ ဒီကနေ့မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တရုတ် မြန်မာနယ်စပ် စခန်းတွေက ဒုက္ခသည်တွေ ဆုတောင်းကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကချင်ဒုက္ခသည် ကူအညီရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးဒွဲပီစက ဒီကနေ့ ဆုတောင်းတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုလို ပြောပြပါတယ်။
at 6/09/2013 09:37:00 PM No comments:
at 6/09/2013 09:36:00 PM No comments:
Myanmar mungdanamare daju rai nga ai Yangon Mare kaba kaw du nga ai Myusha ni kawn Jinghpaw Mung kata majan byin ai (2) ninghpring masat ninghtoi akyu hpyi hpawng hpe June (9) ya shana daw hkying (4:00 kawn 7:00 PM) du hkra galaw lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Lamang hpe Pyaw Tim Yak Tim Rau Yungwi myit rum hpung ni hte Yangon YJH ramma ni kawn woi awn galaw ai re lam hte Yangon du myusha ni marai (800) ram sa du shang lawm lai wa sai lam hpe mung na chye lu ai.
at 6/09/2013 08:32:00 PM No comments:
at 6/09/2013 08:19:00 PM No comments:
at 6/09/2013 06:56:00 PM No comments:
at 6/09/2013 06:55:00 PM No comments:
at 6/09/2013 12:25:00 PM No comments: